MMEMME MAKA EDEREDE MKPARỊTA ỤKA NA SKYPE - SKYPE - 2019
Mmemme ndị nwere ike idekọ mkparịta ụka na Skype
Netwọk mmekọrịta netwọk Twitter bụ ezigbo ndị ọkachamara site n'akụkụ ụwa dum, ebe ọ na-enye gị ohere ịnọgide na-agbaso ihe omume ndị dị ugbu a ma soro isiokwu ndị na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ha etinyeghị oge na ya. Site na ndabara, interface nke saịtị ahụ na ndị ahịa ngwa ahịa dị otu nke ahụ edobere na OS site na ndabara na / ma ọ bụ jiri na mpaghara ahụ. Ma mgbe ụfọdụ, n'ihi njehie na-ezighị ezi ma ọ bụ n'ihi nnyonye anya ndị ọzọ, asụsụ ahụ gbanwere na onye ọzọ si na Russian. N'akwụkwọ anyị taa, anyị ga-agwa anyị otu esi enweta ya.
Anyị na-agbanwe asụsụ na Twitter na Russian
Imirikiti ndị na-emekọrịta ihe na Twitter na ụzọ abụọ - site na onye na-ahụ maka ekwentị ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ịnweta site na ihe nchọgharị PC ọ bụla. N'ihe banyere ngwa maka gam akporo na iOS, mkpa ọ dị ịgbanwe asụsụ ntụgharị adịghị ebili, ọ na-adaba na usoro ahụ. Mana na ntanetị weebụ i nwere ike izute ụdị ọrụ a, na-ekele, a edozi ya n'ụzọ dị nnọọ mfe.
Ya mere, iji gbanwee asụsụ Russian na Twitter, ihe ọ bụla dị na mbụ, ị ghaghị ime ihe ndị a:
Rịba ama: N'ihe atụ anyị, a na-egosi interface na Bekee, ma ị nwere ike ịnwe ọzọ. Esemokwu ndị metụtara isiokwu a anyị na-atụle, anyị na-egosipụta iche iche.
N'otu oge na ibe nke netwọk mmekọrịta gị na ajụjụ (ma ọ bụ na nke ọ bụla ọzọ, nke a adịghị mkpa ebe a), pịa bọtịnụ mkpọtụ aka ekpe (LMB) na mbido profaịlụ gị dị n'akụkụ aka nri aka nri.
Na ndepụta ndalata, chọta ihe ahụ "Ntọala na Nzuzo" ma pịa ya na LMB ka ị gaa.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị nwere asụsụ dị iche iche karịa asụsụ Bekee, enwere ike kpebisie ike ime ihe menu ihe dị mkpa otu nke akara ngosi ndị a:
ọ bụ nke asaa n'ime ndepụta nhọrọ ndị dịnụ;
mbụ nke ndị na-enweghị akara ngosi;
nke mbụ na ngọngọ nke atọ nke nhọrọ (ihe nkedo n'onwe ha bụ akụkụ nke ọnyá dị iche iche).
Gbasaa ndepụta ndetu na ngọngọ "Asụsụ" ma gbanye ya ntakịrị.
Rịba ama: Ọ bụrụ na asụsụ ahụ abụghị Bekee, họrọ ihe mbụ, n'ihu nke a nwere listi listi. N'okpuru ya bụ oge mpaghara, na n'ihu ya enwere ihe abụọ ọzọ, nwere mpaghara abụọ ọ bụla.
Họrọ site na ndepụta nke asụsụ ndị dịnụ. "Russian - Russian"wee mee ka ibelata ala.
Pịa bọtịnụ "Chekwaa mgbanwe".
Tinye paswọọdụ akaụntụ Twitter gị na windo mmapụta, wee pịa ọzọ "Chekwaa mgbanwe" - Nke a dị mkpa iji gosi mgbanwe gị.
Mgbe ịmechara ihe ndị ahụ dị n'elu, a ga-agbanwe asụsụ asụsụ ahụ na Russian, dịka enwere ike ịhụ ọ bụghị naanị na mpaghara ntọala,
kamakwa na isi ihe nke netwọk mmekọrịta.
Ya mere naanị ị nwere ike ịlaghachi asụsụ Russian na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti Twitter, ma ọ bụrụ na mbụ maka ihe kpatara ya gbanwere ya na onye ọ bụla ọzọ.
N'okwu a dị mkpirikpi, anyị kwuru banyere otu esi agbanwe asụsụ n'asụsụ Russian na Twitter, ihe ọ bụla dị na mbụ. Ọrụ a dị nnọọ mfe na emejuputa na naanị ole na ole clicks. Ihe isi ike dị na ịchọta ihe ndị dị mkpa maka nhọrọ maka ngwọta ya na ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịghọta ihe ihe njirimara nwere. Maka nzube a, anyị edepụtala ebe dị mkpa "na mkpịsị aka". Anyị nwere olileanya na ihe a bara uru nye gị.